Ọ bụrụ na ịnatatabeghị uru, kesaa na mkpuchi mkpuchi, ma ọ bụ nụ banyere onye nwere ya - ị bụ onye nwere ihu ọma! Thelọ ọrụ ịnshọransị bụ otu n'ime uru kachasị na United States. Mgbakọ na mwepụ dị mfe, ka ndị mmadụ na-ahapụ ka ha nwụọ - ọ ka mma uru.
Anyị nwere ike ịgbanwe nke a na Intanet na blogosphere? Anyi nwere ike iji ozi nke Cigna eme nzuzu ma mee ihe di iche? Ha na-ekwu na ha nọ na azụmahịa nke ilekọta. Ọ bụ eziokwu? Ọ bụ na ilekọta anaghị efu ego karịa ịghara ilebara anya? Ekwenyere m na ndị dọkịta na-elekọta, mana ụlọ ọrụ Insurance nwere ihe mgbakwunye na-abụghị nke ha.
Nke a abụghị ihe mkpụmkpụ nke igbu ọchụ nke mbụ na anya m. Enwere ike itinye onye were n'ọrụ n'ọrụ nke tụfuru onye ọrụ ya n'ihi ọnọdụ ọrụ ya adịghị mma maka igbu ọchụ ma ọ bụ ọnwụ na-ezighị ezi, gịnị kpatara na ụlọ ọrụ inshọransị enweghị ike? Cigna elegharaghị ọnọdụ ahụ anya, ha nyochara ya ma mee mkpebi siri ike ịhapụ onye ọrịa ahụ ịnwụ.
Akụkọ ndị a na-ewe m iwe ma na-atụ m ụjọ. Ọ bụrụ na ị nwere ngwaahịa na Cigna ma ọ bụ ọbụlagodi ego nke nwere Cigna na ngwakọta, m ga-agba gị ume ka ị ghara ịkwado ụlọ ọrụ dị otú ahụ. Oge eruola mgbe ụlọ ọrụ inshọransị kwụsịrị ịwụnye ego ha n'ọbara nke ndị ahụ na-akwụ ha ụgwọ.
More banyere mgba Nataline:
Michael D. Woeller, Onye isi oche onye isi ala na onye isi mgbasa ozi, CIGNA Corporation
Doug: Naanị m na-ele "Sicko" ụnyaahụ. EGO.
Azụmaahịa na-eme mkpebi ndụ ma ọ bụ ọnwụ kwesịrị ịbụ iwu na-akwadoghị. Plain na mfe.
Ihe bụ nsogbu bụ na ụlọ ọrụ mkpuchi mkpuchi ahụike na-adabere na B payingGH paying ịkwụ ụgwọ uru. Nke a bụ ihe m zutere mgbe m na-achọ inweta nnwapụta maka ọgwụ nwa m nwoke. O nwere nkwado maka Zyrtec-D, nke bụ ọgwụ na-abụghị usoro iwu na 2004 mgbe agha ahụ malitere. Emeghị m. Edere anyị abụọ otu ọgwụ maka ADHD. Anabataram nkem; nke ya abụghị. Enweghi nkwado ya rue afọ a, mgbe akwadoro Zyrtec-D maka ahịa OTC? Ọdịda? I kpebiri.
Akụkọ anyị dị obere ma e jiri ya tụnyere nke a, mana ụkpụrụ ahụ ka dị. Ha kpuchie ụmị ọkpụkpụ ọkpụkpụ na mgbe na-elekọta ha n'uche ha, ha arụzuola ọrụ ha ịkwado ọgwụgwọ ọ bụla dị oke ọnụ maka nwa agbọghọ a. Enwere m obi abụọ na arịrịọ ahụ ruru onye maara nke ọma (lee ihe edeturu m banyere onye na-arịa ọrịa ọrịa na-akwado ọgwụgwọ psychiatric, dịka ọmụmaatụ), yabụ ọ dịtụ mfe ịsị mba. Ọbụna mgbe ndị dọkịta anọ ahụ rịọrọ arịrịọ, ha ekwetaghị.
Michael Moore nwere ikike dị ukwuu: Itinye mkpebi ndị metụtara ahụike n'aka onye ọ bụla ọzọ na-abụghị dọkịta onye ọrịa ahụ dị njọ. Maka ndị akpọrọ 'ndị dọkịta' na Cigna, m ga-ajụ otu ha siri mee ka iyi ha dị na Hippocratic dị na nkwenye ha binyere aka.
Dabere na Forbes, H Edward Hanway ngụkọta ụgwọ bụ $ 28.82 na afọ 5 bụ $ 78.31. Hanway abụwo onye isi nke Cigna (CI) maka afọ 6 wee soro ụlọ ọrụ ahụ rụọ ọrụ afọ 28.
O di nwute na otutu ndi america na ebi ndu abụba, ndi dara ogbi na obi ụtọ. Anyị gụrụ banyere ọdachi dị ka nke a wee chee na ọ gaghị eme mụ na ezinụlọ m. Anyị na-anwa ịkọwapụta mkpa ya site n'echiche dịka "ọ dara site na mgbawa" ma ọ bụ "ọ gaara anwụrịrị". Ndi oru nta akuko anyi achoputaghi ime nke oma ma gha akuko banyere ihe ojoo na mmebi iwu nke ndi mkpuchi n'ihi na otutu ndi insurers na acho ndi na akwado ha. Anyị nwere ndị nta akụkọ dịka John Stossel villefying Michael Moores film Sicko nanị ọnwa ole na ole tupu ọnwụ Natalines.
Site na ihe m gụrụ, ọ bụrụ na ọ gbanwere, ọ nwere ike ibi ọnwa isii ọzọ. O doro anya na ọ gaghị adị ogologo ndụ karịa nke ahụ. Ọ na-arịa ọrịa ga-egbu ya.
M na-eche maka ezinụlọ. Ma, ọ bụghị dị ka ebipụ na akọrọ dị ka ụfọdụ media akụkọ na-achọ ime ya. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe gbasara inweta ọgwụgwọ a ma bie afọ iri abụọ karịa… ya agaghị enwe nnukwu nsogbu. Mana ị nweta transplant a, ọ ga - achọ ka ọ nweta ọgwụ na - ajụ ọgwụ nke ga - eme ka ọ ghara ịda mbà ma mee ka ọ ka njọ worse nke gaara eme ka ọrịa kansa gbasaa ngwa ngwa. NA ọrịa kansa ahụ nwere njedebe na mbụ.
M na-agabiga oke ọgụ m na ụlọ ọrụ ịnshọransị ahụike ugbu a onwe m. Ya mere amaara m na ha nwere ike ịdabere na enweghị ezi uche. Ihe m na-ekwu bụ naanị narị dollar abụọ… enweghị ebe dị nso na ọnụ ọgụgụ isii nke nkwupụta a na-agbagharị.
Ekwenyesiri m ike na e nwere ọtụtụ iberibe na-efu efu, mana isi okwu m bụ na ụfọdụ ndị dọkịta na ndị nọọsụ rịọrọ ọgwụgwọ ahụ ma ụlọ ọrụ Insurance megidere ha. Anyị kwesịrị ijide n'aka na Ọ D NEGH happens ime.
Jisie na agha gi! A bụ m otu n’ime ọtụtụ ‘ndị anaghị enwe mkpuchi’ n’obodo a - m buru oke ibu, agaghị m enwe ike ị nweta ya n’onwe m. (Kidsmụ m na-ekpuchi iwu nke aka ha).
Nke a bụ ihe kpatara ị ga - eji rịọ onye ọzọ na - ekpebiri gị ihe ị ga - eme. Ya mere, onye:
Enwere m obi ụtọ ịmara ndị dọkịta ole na ole na ọ dị mwute ịhụ ka ụlọ ọrụ mkpuchi metụtara ha. A kpaliri otu n'ime ndị enyi m ka m 'wepụ obere oge' na onye ọrịa ọ bụla iji meziwanye 'nrụpụta' ya. Ahụrụ m ya ka ọ na-etinye 1/3 nke ụgwọ ya na mkpuchi ezighi ezi (ụlọ ọrụ ọzọ bara uru).
Ọ KWES toR to isonyere otu ndị dọkịta karịa inwe ọrụ nke ya n'ihi na ọ nweghị ụzọ ọ ga-esi jiri akwụkwọ inshọransị ahụ. Nke a bụ ihe na-emebi obi n'ihi na ọ bụ ọmarịcha Dọkịta ekwesighi ka etinye ya n'ime usoro nlekọta ahụike.
Echere m na ị ga-achọpụta na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị dọkịta abụghị nde mmadụ na ọtụtụ ndị ọzọ na-ahapụ nlekọta ahụike n'ihi nzuzu niile ha ga-emeso. Ọ bụ ọgbaghara.
M bi na Canada maka afọ 6 ma ana m akwado nlekọta ahụike zuru ụwa ọnụ (ọtụtụ ihe na-atụ ụjọ banyere nzụlite m na-agbanwe agbanwe). Ihe kpatara ya dị mfe - Ekwenyere m na ọgwụ bụ okwu metụtara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ bụghị azụmaahịa… n'agbanyeghị na mba Amerịka emeela ya ka ọ bụrụ ahịa EGO.
Canada nwere nsogbu ya, m ga-ekweta. Akụkọ egwu anyị na-anụ ebe a dị ole na ole na agbanyeghị, agbanyeghị.
Ekwenyere m na enwere uru azụmaahịa dị ukwuu maka nlekọta ahụike ụwa - ndị mmadụ anaghị atụ ụjọ ịmalite azụmaahịa ha mgbe ha na-achọghị ichegbu onwe ha gbasara ahụike maka ezinụlọ ha. Ndị mmadụ anaghịzi atụ ụjọ ịkwụsị ọrụ ọjọọ, kwa, na-eduga na ọnọdụ ọrụ ka mma.
Echere m n'ezie na ọ bụ ọkwa dị elu. E kwuwerị, ọ bụrụ na ịnwere ike ịkwụ ụgwọ Insurance CEO $ 28 nde kwa afọ, enwere ohere maka ụfọdụ ịkọwapụta, nri?
Nope. Ọ bụrụ na ị hụ na ị na-enye 33% ỌZỌ nke ego gị n'aka gọọmentị maka mkpuchi… gaa n'ihu. Mana dịka o siri kwụrụ ugbua… M na-akwụ ihe ruru $ 250 / ọnwa maka mkpuchi ahụike zuru oke (dị ezigbo mma). Ọ bụ ezie na onye were m n'ọrụ na-akwụ ọtụtụ ihe. Mana nke ahụ bụ akụkụ nke iji ndị mmepe ọrụ.
Ihe ndozi bụ na anyị na-akwụ ụgwọ na, ezie, ck. Mgbe onye a na-echekwaghị akwụkwọ na - akwụ ụgwọ, ị kwụrụ ụgwọ ya site na ụtụ isi na ọnụego ahụike mụbara, wdg. Anyị na-akwụworị ụgwọ maka nlekọta ahụike ụwa niile universal mana ọ bụ naanị maka ọgwụgwọ - ọ bụghị ọgwụ mgbochi
Banyere okwu gị na Nataline gaara enwe ọnwa isii IHE transplant - ezighi ezi. Na-enweghị transplant, ha nyere ya ọnwa isii n'èzí. Ọkpụkpụ ụmị ọkpụkpụ emeela nke ọma iji kpochapụ leukemia ma ụgwọ ọ bụ mmebi imeju nke na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na a transplant ya, ọ nwere atụmanya nke ndụ zuru oke. Na-enweghị ya, ọ na-aga ibibi.
Usoro a mebiri kpamkpam mgbe ndị dọkịta enweghịzi ike ịbụ ndị dọkịta. Ọ bụrụ na ị tụkwasịghị ha obi, ọ nwere ike bụrụ na ha aghaghị ịmụrụ ọgwụ na-echekwa onwe ha ebe ha mejupụtara mkpuchi ahụ, onye ọrịa ahụ wee jee ije ihe egwu mkpuchi mkpuchi, oke.
Idozi sistemụ ahụ ga-apụta na ị ga-egbochi mmebi iwu na-emebi mmebi iwu na ihe mgbakwasị ụkwụ maka iwu ịgba akwụkwọ, na-egbochi uru ndị inshọransị na itinye usoro ọgwụgwọ na aka nke ndị akwụ ụgwọ $ 100K maka agụmakwụkwọ ha dịka dọkịta. Ikwesiri iguta usoro Dr. Kirschenbaum na Dọkịta, Ego na Ọgwụ maka echiche dị iche. Malite ebe a.
Ugbu a dị ka ọkwa mbụ m kwuru, ọ bụrụ na nke a gaara eme ka ndụ dịrị afọ 20 ọzọ… niile maka ya. Ma ọ bụrụ ọnwa isii ya… Agaghị m awụli elu na mkpebi ọ bụla. Ma ga-eche na onye nke atọ na-ekpezi ikpe bụ ezigbo azịza.
Ndozi ya bụ, ka ị na-ekwu na… ịmachi mmebi iwu na ụkpụrụ ndị ọzọ. Mana m agaghị etinye njikwa nke mkpuchi ahụike na ụdị nke Hillary Clinton. N'ikwu eziokwu, nwee nsogbu zuru oke ebe ego ụtụ isi m ga-efu… achọghị ya ịkwụ ụgwọ maka 'nsogbu ahụike' dị ka ọrụ imi.
Kedu ka ị chere ndị nna anyị tọrọ ntọala mere ya? Azịza ya bụ ime ka ndị dọkịta ghara ibu ibu (ya bụ, iwu dabara adaba) na ịghara ibugharị ya na ndị ụtụ isi niile. Gọọmentị anyị egosila na ọ baghị uru ma kwesịkwa ịtụkwasị obi na usoro ahụike anyị. Na ha na-elekọta, ikpe dị ka nke a ga-abụ ihe nkịtị, ọ bụghị obere nkịtị. Naanị lelee stats nke nkụda obi na ọnye lanarịrị ọrịa kansa nke ndị nwere ọrịa kansa. Ọgwụ nkeonwe dị irè karị.
Ma, dị ka okwu na aka, ka m kwuo ya ọzọ .. ma ọ bụrụ na ndị prognosis bụ maka nwere na a ogologo ndụ mgbe transplant… mgbe ahụ, m niile n'ihi na ọ. Mana agụrụ m okwu ahụ ị kwuru n'ụzọ adịghị mma.
Nke a abụghị ihe dị mfe ma kwesịkwa ịbụ ndị ejiri arụmụka mmetụta uche mee. Naanị eziokwu mam.
Eziokwu ndị ahụ dị mfe, Cigna achọghị imefu iji gwọọ ọrịa, otu Cigna Glendale mere nke a na Ezinaụlọ a, ha lụrụ ọgụ n'ụzọ ọ bụla ha nwere ike, naanị ịchọpụta thelọ Ọrụ Gọọmentị ka ndị a mee ihe na onye na-azụ ahịa, ọ nweghịkwa ihe ọ bụla emeela. Ekpuchiwo ya.
Los Angeles, CA zaghachi »
efunahụrụ m ins ”ogologo oge nkwarụ” thru cigna. nke ọma, ha - sịga zigara m akwụna a nke ọgwụgwọ anụ ahụ nke gwara cigna ihe ha chọrọ ịnụ. ya mere, na-edina m n'azụ na enweghị enyemaka na ihe mgbu na-enweghị ego. onye nwere azịza ya ma ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ nọmba fọnịm ịkpọọ, n'ihi na m na-agafe ego ma a ga m enwerịrị akara ọnụ ọgụgụ m ga - akpọ, ha niile enyereghị aka mana nwata enweghị nọmba ekwentị !!
Nne m anwụọla afọ iri na otu Cigna bụ mkpuchi ya nwere mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ maka Ọrịa flu. Mgbe obere oge gachara ọ bịara dị njọ karịa ka ọ nọ n'ụlọ ọgwụ mana kama inweta ọgwụgwọ ka mma, otu nwanyị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ ahụ bịara leta m na nne m na m ga-ala n'ụlọ n'ihi na Cigna agaghị akwụ ụgwọ maka ya ọzọ nke ọnụnọ ya. Mama m dị naanị afọ iri ise na ise mgbe Cigna kpọpụtara ya n'ụlọ ọgwụ. Anyị amaghị mana Cigna bụ nke matara n'ihi akwụkwọ ndekọ ahụike ka a ga-ezigara ha maka ụdị ịkwụ ụgwọ ọ bụla n'ụlọ ọgwụ ahụ nne m nwere eriri afọ ya nke eriri afọ ya nke mere o jiri na-agba ọbara site na ikensi wee nwee ike guzoro onwe ya mgbe a gwara ya Cigna kwuru na ha agaghị akwụ ụgwọ maka ọgwụgwọ ọzọ. Mama m ga-alaghachi n'ime izu ahụ gaa na ER na-arịa ọrịa nke na ha enweghị ike ịnara ọbara ya n'ihi na ọ ga-anwụ ozugbo ahụ ka etinye ya na ICU na mgbe ahụ bụ mgbe anyị chọpụtara na o nwere eriri afọ na eriri afọ ya ọ ga-achọ ịwa ahụ mana ebe ọ bụ na emeghị ya n'oge na-adịghị anya, emepere ya ka ọ bute ọrịa nke eriri afọ ya niile site na eriri afọ ya nọ ọdụ ebe ahụ n'ihi na mama m amaghị na ọ nwere nke a mana Cigna mere mgbe ha chụpụrụ ya n'ụlọ ọgwụ. A na etinye ya na nkwado ndu ya na ihe na-erughi 11 ụbọchị mgbe emechara ụbọchị 55 tupu m ga - agbanye 7years afọ m ga - edebanye aha maka nne m ka ewepụrụ ya nkwado ndụ n'ihi na enweghị olile anya n'ihi etu ọrịa si gbasaa n'oge ọ nọ pụọ n'ụlọ ọgwụ. Kpọọ ya ihe masịrị gị mana ọ bụ igbu ọchụ mgbe ego ma ọ bụ mkpuchi ziri ezi ga-edebe nne m ndụ mana ebe ọ nwere CIGNA HMO ha kpebiri na ọ baghị uru ịkwụ ụgwọ. N'agbanyeghị nke ahụ 18years gasịrị, m ka na-eche ọtụtụ ndị ọzọ nwụrụ n'aka ha.
Jo Joshua Godfrey onye tara ahụhụ n'aka cigna guzobere United Patients Of America.